Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် တဆေးမျက်နှာ ထုတ်လုပ်သူနှင့် တဆေးမျက်နှာ ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
ကျနော်တို့ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်များမှာ Taiwanထုတ်လုပ်သူ, ပို့ကုန်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအတွက်ဆက်ဆံရေးမှာကြောင်း -based ကုမ္ပဏီ တဆေးမျက်နှာ ကျယ်ပြန်အကွာအဝေးနှင့်အတူ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ၏-on အချိန်ပေးအပ်ခြင်းကိုသင်တို့အားပေးအာမခံထားသောမြင့်မားသောအရည်အချင်းပြည့်မီအပ်နှံထားသောလုပ်သားအင်အားရှိသည်။ သင်သည်မည်သည့်စတိုင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
VSK တဆေး Moisturizing မျက်နှာဖုံး
ပိုးထည်၏အကူအညီဖြင့်,အသားအရေကိုစုပ်ယူနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောအာဟာရများကိုအလွယ်တကူမိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်,အရေပြားခြောက်သွေ့စေရန်,အသားအရေအစိုဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းပါစေ,နှင့်အရေပြား elasticity နှင့်တောက်ပထိန်းသိမ်းရန်.
မျက်နှာသန့်စင်ပြီးနောက်,ပိုးမျက်နှာဖုံးပေါ်ထွက်လာ,ပုလဲစက္ကူဖြူကိုဖြုတ်ပစ်လိုက်ပြီးဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ.အလယ်ပိုးပိုးမျက်နှာဖုံးပြီးနောက်အသားအရေကိုလုံးဝတွဲဖြစ်ပါတယ်,အပြင်ဘက်အပြာကျောထောက်နောက်ခံစက္ကူကိုဖြုတ်ပစ်လိုက်.၁၅ ယောက်ကိုစောင့်ပါ-မိနစ် 20.မျက်နှာဖုံးကိုဖယ်ရှားပါ.စုပ်ယူသည်အထိကျန်ရှိနေသေးသောအနှစ်သာရ Pat. (ပိုကောင်းသောရလဒ်များအတွက်နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်)
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.antiagingproducts.com.tw/my/yeast-facial.html
တဆေးမျက်နှာ ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုစျေး ၀ ယ်ပါ။ တဆေးမျက်နှာ ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ချိသူ တဆေးမျက်နှာ ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan